China Ornamental Izahlulo mveliso kunye nabenzi | Iimpawu kunye nobunjineli
Thina (i-M & E) singumvelisi oqeqeshiweyo wezinto ezenziwe ngentsimbi kunye nentsimbi yokuhombisa. Ulawulo lwangaphambili kunye nefilosofi ejolise kwimarike ifumana uphuhliso oluzinzileyo ngokweemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nedumela elihle.
I-M & E yokuhombisa intsimbi kunye nentsimbi yokuphosa okanye iimveliso zenziwe ngezinto ezenziwe ngomgangatho ophezulu, eziveliswa zombini ziinkqubo zomsebenzi wesintu kunye nendlela ye-wax elahlekileyo enokuthi isiqinisekise ukuba senze uluhlu olukhulu lomgangatho ophezulu, izinto eziyilwe kakuhle ezifunwa ngabathengi bethu.
Izinto ze-M & E zokuhombisa zentsimbi zinezitayile ezahlukeneyo ngaphezulu kwamakhulu amakhulu esinyithi esingwevu i-HT-20, Amreican iklasi esemgangathweni engama-20 enokufakwa nge-electrode yentsimbi, iimveliso zentsimbi ye-Ornamental zineendlela zothotho ezinje ngeentyatyambo, amagqabi, ikepusi, iikhola, imiqulu kunye iipaneli… .. ngamakhulu obukhulu kwizinto zodidi oluphantsi zentsimbi ezingama-25-35 ezinokudityaniswa ngokulula zii-electrode zentsimbi.
Izixhobo ze-M & E zokuhombisa zentsimbi kunye nezentsimbi ziye zithunyelwa kumazwe aseYurophu nakumazwe asempuma aphakathi njl njl. Kangangeminyaka emininzi. Banelisekile kakhulu ngabathengi.
Sinikezela ngeyona nkonzo intle
Nceda ufunde ikhathalogu yethu ngononophelo kwaye usazise izitayile ezineenkcukacha. Ubungakanani kunye nobungakanani obufunayo. Okwangoku ukuba ukwishishini lethu, siya kuhlala sikunikezela ngekhathalogu zamva nje, iifoto, ulwazi olutsha esiluphuhlisileyo kwaye siyakwamkela ukuba usithumelele nayiphi na imizobo emitsha okanye imizobo. Samkela nayiphi na iodolo enkulu okanye encinci, sinemveliso enkulu yoku-odola kwaye siqonde i-necsssity yeeodolo ezincinci. Nje ukuba nawuphi na umyalelo uqinisekiswe, ukuthunyelwa kuya kwenziwa ngexesha.
Siyazingca ngeemveliso zethu ze-M & E zithengisa kakuhle kakhulu kwimarike yehlabathi ngokusebenzisana ngokusondeleyo kubathengi bethu kwihlabathi liphela. Siyakuqinisekisa ukuba uyoneliseka ziimveliso zethu ezintle, inkonzo egqwesileyo kunye nexabiso elifanelekileyo.
Wamkelekile ukubonelela ngazo naziphi na iingcebiso kunye noyilo olutsha
Egqithileyo Imibhobho yamanzi kunye neMveliso yokuhambisa amanzi
Okulandelayo: Ubungakanani obukhulu beCastings
Amacandelo okuhombisa i-Iron